चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्न नदिने एमाले र माओवादीको अडान  OnlineKhabar
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्न नदिने एमाले र माओवादीको अडान
२६ असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुखले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बुधबार मात्र अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । जसमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले तीन दलका प्रमुख सचेतक र महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सदस्यलाई बोलाएका थिइन् ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले संशोधनसिहत विधेयक संसदमा पेश गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । तर, एमाले र माओवादीका नेताहरुले समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा आएको विधेयक मन्त्रीले संशोधन गर्न नसकिने बताएका छन् । यदि संशोधन गर्नु पर्ने हो भने सरकारी प्रस्तावलाई फेरि महिला बालबालिका समितिमा नै पठाउनु पर्ने दुई दलको अडान छ ।
विधेयक फेरि समितिमा पठाउन सम्भव छैन । भोलि संसदको अन्तिम बैठक बस्ने तयारी छ । त्यसपछि संसदसँगै समिति रहने छैन र संसदपछि आउने संसदमा पनि यो विधेयक जाने छैन ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहमति जुटेन । आज कार्यसूचीमा नआउने भयो ।’
बैठकमा सभामुख घर्तीले सहमति जुटाउन दलहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले भने भोलिको बैठकमा जसरी पनि कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका छन् । साथै विधेयक संसदमा पेश गर्न दिन एमाले र माओवादीलाई आग्रह गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन खोज्छ । तपाईंहरु सक्नुहुन्छ भने बहुमत पुर्‍याउनुस् ।’
डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार ! बल माओवादी र एमालेको कोर्टमा
२०७४ असोज २६ गते १७:०७ मा प्रकाशित
विद्युतीय तारले पोखरा कुरुप ! मेयर भन्छन्– एक करोड लाग्छ !
तुइन बिस्थापनका लागि गायिका आनीले दिइन् १ करोड रुपैयाँ
नेकपाको आकस्मिक बैठकः डा. केसीलाई भोलि नै काठमाडौं ल्याउने निर्णय
देशभरका सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको हडताल, नेकपानिकट भने सहभागी नहुने
डा. गोविन्द केसीलाई आजै काठमाडौं ल्याउने तयारी
पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध, खुल्न समय लाग्ने
kusan sharma लेख्नुहुन्छ | २०७४ असोज २६ गते १४:२५
डा.गोविन्द के.सीको माग सम्बोधन गर्ने,
विधेयक पेश गर्न जति दिन ढिलो हुन्छ,
बाम गठबन्धनलाई उतिनै सिट घाटा लाग्छ,
कांग्रेसले पनि यो विधेयकलाई यदि,
राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न गर्यो भने,
यो बिधेयक(केसीका माग)असफल हुनेछ,
जुन जनताको हितमा हुने छैन l
कपिल पन्त लेख्नुहुन्छ | २०७४ असोज २६ गते १६:३८
नेपाली जनताको हीतमा भएको यो विधयेक पास हुन नदिन जो जसले प्रयत्न गर्छन, उनीहरूलाइ नेपाली जनताले अवको निर्वाचनमा देखाउने छन् । कोशिस गर जनताको दिमाग घुम्यो भने थाहा पाउँछाैं ।
जय देश जय जनता
भोलि देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको घोषणा
इन्टरनेटमा कालोबजारी ! सरकार भन्छ- मूल्य बढाए कारवाही गरिन्छ
नेकपासम्वद्ध चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य संस्था बन्दको अवज्ञा गर्ने
बजेट सक्न कर्मचारीको जम्बो टोली भारत उड्यो
को-कोसँग झुक्यो ओली सरकार ? अब झुक्ने पालो- डा. गोविन्द केसीसँग
काठमाडौंको फोहोरबाट बिजुलीः हात्ती आयो फुस्सा !
कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने डा. केसीको अडान, भने – मन्त्रीस्तरीय टोली चाहियो
आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको घोषणा